प्रधानमन्त्री र मन्त्री किन जान छाडे सिंहदरबार ? कर्मचारीसँग समेत मतभेद – Mission Khabar
प्रधानमन्त्री र मन्त्री किन जान छाडे सिंहदरबार ? कर्मचारीसँग समेत मतभेद
मिसन खबर १३ आश्विन २०७७, मंगलवार १३:१२
काठमाडौं । यसैपनि कोरोना महामारिका कारण देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा मन्त्रीहरुको उपस्थिति कम । अझ, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी नेकपामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको औपचारिक छलफलले तिब्रता पाएपछि सिंहदरबारमा झनै मन्त्रीहरुको उपस्थिति कम देखिन थालेको छ ।
यतिबेला उर्जा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती लगायतका केही मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नियमित उपस्थित भएपनि अन्यमा मन्त्रीहरुले उपस्थितिको समय घट्न थालेको छ । मन्त्री फेरबदलको चर्चासँगै कर्मचारीले मन्त्रीलाई टेर्न छाडेको, सिंहदरबारमा मन्त्रीको उपस्थिति घट्न थालेको र मन्त्रालयगत कामकारबाही प्रभावित भएको गुनासो बढ्न थालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नियमित जस्तो पुग्ने मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल समेत आजकल आफ्नो सरकारी निवासमा बढी बस्न थालेका छन् । छिटफुट मात्रै उनी मन्त्रालय भेटिने गरेका छन् । सोमबार हामी मन्त्रालयमा पुग्दा १ बजेतिर मात्रै मन्त्री पोखरेल आएका थिए ।
हामी भदौ २० देखी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेतृत्व सम्हालेको महत्वपूर्ण मन्त्रालय अथतर्फ लाग्यौँ । यो मन्त्रालय करिब एक महिनादेखी कर्मचारीको भरमा चलेको छ । महत्वपूर्ण फाईलहरुमा हस्ताक्षर गराउन बालुवाटार धाउनुपर्ने बाध्यता यहाँका कर्मचारीमा छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रालयमा नआएका कारण मन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय भएको स्थानमा बत्ति समेत बालिएको थिएन ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयमा हामी पुग्दा बैठक चलिरहेको थियो । मन्त्रीसँगै अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित देखिए पनि कोरोना महामारिले विगत जस्तो कामकारबाही गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारी नै गर्दै थिए । अनुगमन जान र भीडभाड गर्न असम्भव भएपनि जनतालाई राहत दिलाउनेगरि काम गरिरहेको दाबी मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिवको थियो ।
सिंहदरबारका मन्त्रालयलमा कर्मचारीहरुको उपस्थिति भने पछिल्लो समय बाक्लिन थालेको छ । सेवाग्राहीको चलहपहल खासै नदेखिने यहाँका मन्त्रालयमा मन्त्रि फेरबदलको गृहकार्यले मन्त्रीहरु निक्कै कम मात्र उपस्थित हुन थालेका छन् । आफूले नेतृत्व सम्हालेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अनि अर्थमा पुग्नु त परको कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमै लामो समयदेखी प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थिति नगन्य बन्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको सुनसान अवस्था बारे जानकारी लिदा प्रवक्ता शंकर नेपालले हामीलाई आफूहरु प्रशासनिक काममा व्यस्त हुने भन्दै प्रधानमन्त्री आउने जाने बारे जानकारी नहुने र चासो समेत नलिने बताए । सूचना अधिकारी कविता फुँयालले भने प्रधानमन्त्री कमै आउने गरेको स्विकार गरिन ।
सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयलमा अहिले मन्त्री कम पुग्न थालेका छन भने कर्मचारीको उपस्थिति पनि कोरोनाका कारण विगत जस्तो देखिदैन । कर्मचारीमा मन्त्री फेरिएलान, अहिलेको दुरगामी महत्वको कुनै निर्णयमा भोली आउने मन्त्रीले जिम्मेवारी लेलान नलेलान भन्ने दोधारमा छन् । राजनीतिक अन्यौलताका बीच स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी र मन्त्री बीच समेत कामको तालमेल मिल्न सकेको छैन ।
पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्रीहरु मन्त्रालयमा जादै स्वार्थको झोला बोकेर जाने, कानुन र बिधिमा चल्ने भन्दा पनि स्वार्थ पुरा गराउनेगरी कर्मचारीलाई चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिका भएकाले सरकार कमजोर देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन– ‘न निडर र दरिलो नेतृत्व दिन सक्छन, न कानुन, बिधि र प्रक्रियाकै ज्ञान मन्त्रीमा हुन्छ । स्वार्थ सहितको राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई समेत बिगारेको छ ।’ ओजिलो नेतृत्व, निष्ठा, इमान्दारिता र दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्ति मन्त्री बन्ने हो भने कर्मचारी समेत सहि ट्राकमा आउने र देशले गति लिने जनताको चाहाना आकांक्ष पुरा हुने कोइराला बताउँछन । मन्त्री छान्ने, फेरबदल गर्ने बिषय हल्ला गरेर समय लगाएर गर्दा समेत स्थायीत्व सहितको कमले गति लिन नसकेको बुझाई पूर्व प्रशासक कोइरालाको छ ।
मन्त्रिको उपस्थिति कम हुँदा मन्त्रालयगत कामकारबाही गर्न समस्या । अझ, विगत जस्तै छोटो समयमा मन्त्री फेरबदल भैरहँदा कर्मचारीबाट मन्त्रीलाई असहयोग र अटेरी । निस्ठा र इमान्दारिता नभई स्वार्थसहित मन्त्री बन्नेहरुको प्रतिस्पर्धाले देशको विकास र समृद्धीको यात्रामा समस्या देखिदा कर्मचारी प्रशासनमा समेत अन्यौलता बढेको देखिन्छ । देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबा मन्त्री र कर्मचारीको जुहारी चल्ने स्थान भन्दा पनि विकास, सुशासन र स्थायीत्वको रोलमोडल बन्न सक्नुपर्छ ।